साउनको सौन्दर्य : १६ शृंगारको महिमा | सुदुरपश्चिम खबर
भन्नलाई त भनिन्छ, विद्या समं नास्ति शरीर भूषणम् । मानिसका लागि विद्या नै सबैभन्दा ठूलो गहना हो । यद्यपि मान्छेले आफ्नो रुपरंगमा निखार ल्याउन बाहिरी गरगहना लगाउने गर्छन् । सौन्दर्यको एक अहम् हिस्सा पनि हो यो ।
गहनाको प्रचलन प्राचीन समयदेखि नै रहेको पाइन्छ । जब मानिसमा चेतनाको विकास भयो, तबदेखि नै मानिसले गहनाको प्रयोग गर्न थालेको पाइन्छ । पहिले महिला तथा पुरुष दुवैले गहनाको प्रयोग समान तवरले गर्ने गरिए पनि समय क्रमसँगै गहना महिलाको पर्याय बनेको देखिन्छ ।
धार्मिक मान्यता अनुसार प्राचीन समयका ऋषिमुनिहरूले केही त्यस्ता साधन निर्माण गरे जसबाट महिलाको शारीरिक एवं मानिसिक स्वास्थ्यको रक्षा हुन सकोस् । प्रचलन बढ्दै जाँदा यस्ता साधनलाई समेत सुन्दर गहनाका रूपमा अंगाल्न थालियो र नियमपूर्वक पहिरन थालियो ।
पूर्विय सभ्यतामा सोह्र शृंगारको व्याख्या गरिएको छ । खासगरी महिलाको लागि सोह्र शृंगारको आवश्यक्ता र त्यसको अर्थ बताइएको छ ।
के हो सोह्र श्रृंगार ?
श्रृंगार शब्दको प्रयोग सामन्यतः ब्रस्त्रभूषण आदिले शरीरलाई सु–सज्जित गराउने अर्थमा लिइन्छ । सोह्र श्रृंगार शरीरको स्वच्छतादेखि श्रृंगार एवं मुस्कान, शारीरिक हाउभाउको संयोजन मानिन्छ । यसमा मेहेन्दी, आभूषण, केस–विन्यासदेखि मुस्कानसम्म पर्छ ।
स्नान – श्रृंगारको सुरुवात स्नानपछि गर्नुपर्छ ।
बस्त्र – बिना वस्त्र सबै सौन्दर्य कान्तिहीन लाग्छ । प्रस्तर युगबाट शीत, ग्रीष्मबाट बच्न मानिसले रुखको बोक्रा, पशुको छालाले आफ्नो शरीर ढाक्ने गर्थे । कालन्तरमा सभ्यताको विकाससँगै बस्त्रमा अनेकन ढाँचा र बान्की देखापरे । यसरी बस्त्र सौन्दर्यकै मूख्य पाटोको रुपमा विकास भएको हो ।
हार – हार लगाउनुको अर्थ सुन्दर देखिनुका साथै स्वास्थ्यका लागि पनि हो । गला वा यसको नजिकमा यस्तो प्रेशर विन्दु हुन्छ, जसको केहि हिस्साबाट शरीरलाई लाभ प्राप्त हुन्छ ।
बिन्दी – टिका अर्थात बिन्दीलाई सौभाग्यको प्रतिक मानिन्छ ।
काजल – आँखालाई सुन्दर बनाउन एवं आँखाको सुरक्षा दुबै दृष्टिले काजल प्रयोग गरिन्छ ।
अधरंजन – ओंठ एवं अधरको सुन्दरता बढाउनका लागि त्यसमा केहि रंग प्रयोग गरिन्छ । प्राचिन कालमा फूलको रसबाट यो काम गरिन्थ्यो ।
नथ – नाखको सोभा बढाउनका लागि नाखमा छेडेर केहि प्रकारका नथ लगाइन्छ ।
केस सज्जा – केसमा सुगन्धित तेल लगाएर आकर्षक बान्कीका सजाइन्छ ।
कमरबन्ध – कमरको सौन्दर्यका लागि कमरबन्ध प्रयोग गरिन्छ । यसलाई सुन, चाँदी, हिरा, मोती जडान गरी विभिन्न आकारमा बनाइन्छ ।
चरणराग – खुट्टा वा हातको सौन्दर्य साथै छालाको सुरक्षाको लागि मेहेन्दी लगाउने परम्परा छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)
मान्छेले किन अर्काको पिँठ्यु पछाडि कुरा काट्छ ?
केपी शर्मा ओलीको विश्लेषण : अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाउने प्रयास हुनसक्छ